कलेज पढन गएकी १९ बर्षिय ‘अमिषा’ काठमान्डौंबाट बेपत्ता, खोजिदिन परिवारजनको गु’हार ! – Dainik Samchar
कलेज पढन गएकी १९ बर्षिय ‘अमिषा’ काठमान्डौंबाट बेपत्ता, खोजिदिन परिवारजनको गु’हार !
March 19, 2021 321
जनकपुरधाम । कलेज पढन गएकी १९ बर्षिय अमिषा यादव विगत ५ दिनदेखि बे’पत्ता रहेको परिवारजनले जनाएको छ । प्रदेश नम्बर १ को झापा जिल्लास्थित बिर्तामोडका स्थायी बासिन्दा श्रवण यादवकी १९ बर्षिय छोरी अमिषा यादव गत आईतबारदेखि हराइरहेको जनाइएको छ ।
काठमान्डौंको गोँगबु स्थित रहेको पासाँग ल्हामु शेर्षा मेमोरियल कलेजमा कक्षा १२ मा अध्ययन गर्दै आएकी अमिषा आईतबार कलेज गएकी र पुनः घर फिर्ता नआएको उनकी आमा गीता देवी यादवले जानकारी दिइन् । काठमान्डौंको गोँगबु स्थित विगत २० बर्षदेखि बस्दै आएको यादव परिवारले छोरी घर नआएपछि साँझदेखि नै खोजबिन तीव्र पारिएको थियो ।
मेनेजमेन्ट विषय लिएर कक्षा १२ पढने अमिषा आईतबार समयमै कलेज गएकी र पुनः घर फिर्ता नआएको परिवारजनले जनाएको छ । “अमिषाको बिहेको कुरा चल्दै थियो । ४ बर्षदेखि हाम्रै आफन्त पर्ने एउटा केटासँग उनको विवाह फिक्स गरेका थियौं । अमिषा धेरै खुसी पनि थिइन् ।
आईतबार कलेजबाट घर नै फर्किनन् । अनी हामी खोज्न सुरु गर्यौ ।”– आमा गीता देवी यादवले भनिन् । कोहीसँग प्रेम सम्बन्ध समेत नभएको दाबी गर्दै उनकी आमाले छोरी कसैसँग गएपनि कम्तीमा एक फोन कल गरी जानकारी गराइदिन आग्रह गरेकी छन् ।कसैले पैसाको लोभमा छोरी उठाएको छ भने उनले पनि फोन गरी जानकारी गराउन आग्रह गरेकी हुन् ।
अमिषा घर नआएपछि भोलीपल्ट नै काठमान्डौं स्थित रहेको नयाँ बसपार्क प्रहरी र चक्रपथ प्रहरीमा जानकारी गराएको जानकारी दिएको हो । तुरुन्तै सक्रिय भएको प्रहरीले अमिषाको खोजबिन सुरु गरेको बताइएको छ । कलेजबाट उनको घर आउन बढीमा ५ देखि ७ मिनेटको मात्र बाटो रहेको भन्दै उनकी आमाले सिसिटिभी फुटेजमा कलेजबाट निस्केको र अर्को सिसिटिभी बि’ग्रिएको जनाउँदै तेस्रो सिसिटिभिमा उनको साथीहरु भएपनि अमिषा भने नदेखिएपछि शंका उपशँका जा’हेर गरेको हो ।
अमिषाले गत शुक्रबार महाशिवरात्रीमा पशुपतिनाथ दर्शनको लागि बहिनीसँगै गएकी थिएन । सोही दिन करिब ५ मिनेटको अन्तरालमा अमिषाले फेसबुकमा ४ वटा पोष्ट गरेकी हुन् । १ बजेर १५ मिनेटदेखि लिएर १ बजेर २६ मिनेटसम्म भावुक भिडियोहरु पोष्ट गरेकी हुन् ।
परिवारजनले छोरीलाई कुनै अ’तोपत्तो नभएको भन्दै शंका जाहेर गरेको छ । उनलाई कसैले उठाएको, दु’र्घटना भएको वा के भएको बारे अझै नखुलेकोले परिवारजनमा प’रेशानी छाएको उनकी आमाले बताइन् । समाजिक सँजाल मार्फत परिवारजनले छोरीलाई खोजिदिनको लागि आग्रह गरेको हो ।
Prevदुई दिन देखि बढेरहेको सुनको भाऊ नसोचेको तरिकाले घट्यो , तोलाको कति ?
Nextके गर्भवती महिलालाई यौ:न सम्पर्क गर्दा बच्चालाई असर गर्छ ?
गुल्मीदरवार गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमा कांग्रेस विजयी
उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि अष्ट्रेलिया पुगेकी रमिला सधैका लागि अस्ताईन
पुन्य गौतमले, बालेन शाह अमिरिकन एजेन्ट भएको खुलासा गरे, देखाए यस्तो प्रमाण (भिडियो सहित) (7199)